Blog ers ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayidibanisa njani iTwitch Prime kwi-GTA
NgoJanuwari 31, 2022 yi Abalandeli abakwi-Intanethi
Thenga Abalandeli! Uyiqhagamshela njani iTwitch Prime ukuya kwiGTA. Ukuba ungumdlali we-GTA kwi-Intanethi kwaye unayo iTwitch Prime unokufumana lula imivuzo emininzi. Ukuba uyaqhubeka ufunda esi sikhokelo uya kufunda indlela yokudibanisa iTwitch Prime ukuya kwi-GTA ukuze ufumane izaphulelo kunye nezinye izinto. Ukuba ufuna uncedo unokufunda kwakhona Indlela yokufumana iTwitch Prime? … ufunde kabanzi
izigaba Njani iRRSS
Uyenza njani i-poll kwi-Twitch
Thenga Abalandeli! Uyenza njani i-poll kwi-Twitch. Enye indlela yokunxibelelana nabasebenzisi ngelixa usasaza bukhoma kwaye ufumane uluvo lwabanye kukuvota, ezi zinokuqhutywa kusetyenziswa incoko / umyalelo wokuvota. Kweli nqaku sicacisa yonke into malunga nendlela yokwenza uphando kwi… ufunde kabanzi
Meyi 12, 2021 yi Umkhosi
Thenga Abalandeli! Ukuba ngumntu odumileyo kwiintanethi zentlalo yinto ebalulekileyo kwabaninzi, kuba njengabantu, ekubeni sizalwa kukho isidingo esingenakuphepheka sokwamkelwa luluntu esiphila kulo. Kuyafuneka ukwenza uphononongo oluntsonkothileyo ukuqonda le ngongoma, kodwa namhlanje asizukuthetha… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Zininzi iindlela zokusebenzisa iinethiwekhi zentlalo. Ngamanye amaxesha zidla ixesha kwaye zinokuba nzima kakhulu. Okubaluleke ngakumbi, xa bevumela abanye ukuba babone yonke into abanye abongeze kwiprofayile yabo ngaphandle kwengxaki. Nangona kunjalo, kukho iindlela ezininzi zokunqanda ukugcwala kwinethiwekhi yoluntu, umzekelo, ... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Idilesi ye-imeyile ehambelana ne-Facebook inempembelelo kwizenzo ezininzi zenethiwekhi yoluntu, umzekelo, ikuvumela ukuba ufumane izaziso nge-imeyile exeliweyo. Ngethamsanqa, i-Facebook ikuvumela ukuba utshintshe le dilesi nanini na xa ufuna, ukuze wenze oku kungapheliyo ... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! I-Facebook ineendlela ezahlukeneyo zokukhetha ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso ukuze amava ngaphakathi kwenkonzo angcono kakhulu. Ngale ndlela, awona maqonga ezentlalo asetyenziswa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku akuvumela ukuba uqwalasele imisebenzi emininzi yabucala yabasebenzisi babo. Ke umsebenzisi ngamnye unokukhetha umsebenzi kwaye ahlehlise umsebenzi... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Zininzi iindlela zokusebenzisa imidiya yoluntu, zonke ezo ngamanye amaxesha zidla ixesha kwaye zinokuba nzima. Ngaphezu kwako konke, xa bevumela abanye abantu ukuba bajonge ngaphandle kwengxaki yonke into abanye abongeze kwiiprofayile zabo. Nangona kunjalo, kukho iindlela ezininzi zokuthintela ukonganyelwa… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! I-Facebook ngaphandle kwamathandabuzo lelona qonga lidumileyo le-intanethi ngalo lonke ixesha, ngokucacileyo inokhetho olungapheliyo oluvumela abasebenzisi ukuba bonwabele zonke iintlobo zezenzo omnye komnye. Phakathi kwezi, namhlanje "abalandeli" abadumileyo baya kugqanyiswa, ukhetho apho nawuphi na umsebenzisi ... ufunde kabanzi
Ungayisombulula njani iingxaki zam kwi-twitter?
Thenga Abalandeli! NgeZiko loNcedo le-Twitter, uMsebenzisi unokusombulula iingxaki ezinxulumene neAkhawunti yabo yoMsebenzisi: Ngena, iAkhawunti emisiwe, iProfayili eHakiweyo kunye nokuphucula ukhuseleko lweAkhawunti yabo kwiqonga. Umsebenzisi unokusombulula iingxaki zemiba yokusetyenziswa ngokubanzi: Izaziso, iifoto kunye neevidiyo, imiba enxulumene neProfayili yabo, ... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Umsebenzisi we-Twitter unokuqinisekisa ukuba uKhuseleko lweAkhawunti yakhe luNcincisiwe, ngokuqwalasela oku kulandelayo: Jonga iiTweets ezizenzekelayo ezipapashwe yi-Akhawunti yakhe, qaphela iMiyalezo eNgqongileyo engacwangciswanga ethunyelwe kwi-Akhawunti yakhe. Umsebenzisi ubona imisebenzi eyenziwa ngeAkhawunti yakhe: Indlela yokulandela, ukungalandeli, ukubhloka, njl.; fumana izaziso kuTwitter... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Umsebenzisi we-Twitter unethuba lokurekhoda ukusasazwa okubukhoma kunye ne-Hardware okanye iSoftware; ngenxa yesi sizathu, kufuneka ulandele le nkqubo: Kuqala, yiya kuqwalaselo lwesicelo sakho okanye iHardware. Kanye kwisicelo sakhe, uMsebenzisi uyaqhubeka nenkqubo: Khetha iseva yoThutho eyenzelwe wena; khetha uTwitter kwi... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Ukwenza iakhawunti yakho ingasebenzi kwiWebhu, uMsebenzisi weTwitter: Ufuna ukungena kwiakhawunti yakho yePeriscope, cofa kwi icon yeProfayile yakho kwaye ukhethe Useto kwimenyu ephumayo, cofa Vala iAkhawunti. Emva kokucofa i-Akhawunti ye-Akhawunti, ibhokisi yencoko yababini yemethodical ivela kwiscreen,… ufunde kabanzi
Uwuxela njani umxholo oyimfihlo wemultimedia?
Thenga Abalandeli! Kwiqonga le-Twitter, ukuba uMsebenzisi ujonga iifoto kunye neevidiyo kwiiTweets abacinga ukuba kufuneka baphathwe njengoMxholo oyiMfihlo, ngokutsho koMgaqo-nkqubo we-Multimedia we-Twitter, banomsebenzi kunye nelungelo lokunika ingxelo kwi-Twitter. Ukunika ingxelo yeefoto kunye neevidiyo kwiiTweets, uMsebenzisi kufuneka: afumane iTweet… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Umsebenzisi we-Twitter unenketho yokuqwalasela i-PIN yeSMS; ngenxa yale njongo, kufuneka ulandele le nkqubo: Okokuqala, kufuneka uqinisekise ukuba ifowuni yakho iqhagamshelwe kwi-akhawunti yakho Twitter. Okulandelayo, uMsebenzisi ungena kwiakhawunti yakhe ye-Twitter kwiwebhu kwaye ibekwe kwiiSetingi zeselfowuni; ngena kwi... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Emva kokuba uMsebenzisi eqinisekisile ukuba i-akhawunti yakhe ye-Twitter iye yaphazamisa ukhuseleko lwayo, kucetyiswa ukuba bathathe amanyathelo alandelayo okukhusela i-Akhawunti yabo: Lahla iiTweets ezingafunekiyo ezipapashwe ngelixa ukhuseleko luphazamisekile. Kwakhona, jonga i-PC yakho kwiintsholongwane kunye ne-malware, beka iindawo zokhuseleko kwinkqubo yakho ... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Ngamanye amaxesha siziva ngathi sichitha iiyure ezininzi sijonga i-imeyile kwaye sijonge kwi-inbox, oku kwenzeka namanye amaqonga kwaye mhlawumbi ngeGmail. Nangona kunjalo, uGoogle wenze ukuba kube lula kubasebenzisi ukuba bafumane okuninzi kwiGmail yabo ngezixhobo zokuphelisa imisebenzi ephindaphindwayo. Siza kukubonisa, zeziphi… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Ngokuhamba kwexesha iGmail yenze izinto ezintsha ezininzi kwaye ngenxa yezi zizathu siza kukubonisa, yeyiphi imisebenzi yeGmail? Imbono yencoko: I-Gmail ikuvumela ukuba ubone zonke ii-imeyile ezingenayo neziphumayo, onokuthi uzijonge ngokujonga kwakhona ii-imeyile zakho zangaphambili zolwazi. Ukuba awukwazi... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! I-Gmail yenye yezona nkonzo zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi kwaye yinkonzo yasimahla eyenza kube lula ukufikelela kuso nasiphi na isixhobo. Xa usebenzisa i-imeyile yakho, unendlela yokwenza iGmail yakho ibe yeyakho? Guqula imvelaphi, ifonti kunye nomxholo kwiGmail: Ukwenza imvelaphi kwaye uyenze ibe yeyakho ... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! I-Gmail lelinye lawona maqonga adumileyo, kulula ukuseta nokusetyenziswa. KwiGmail, eyona nto ibalaseleyo kukuba ukubhalisa iakhawunti yakho entsha simahla. Ukwenza iakhawunti ye-Gmail kunenzuzo kwaye kunenzuzo ekusebenziseni kwakho, kuba kukuvumela ukuba ube ngumnini weshishini lakho, ihlakani lakho elingcono,... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Izinto ezintsha kumaxesha amva nje inkonzo ye-imeyile kaGoogle ibenayo, kukubeka iGmail kwindawo. Ii-imeyile ze-Gmail zezona zisetyenziswa kwaye zithandwa kakhulu emhlabeni ngenani elibalulekileyo labasebenzisi abazizigidi ezingama-600. Kule mihla i-Gmail isanda usuku nosuku, kwaye… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! I-Pinterest okwangoku liqonga elinika abantu imvume yokubonisa okona kulungileyo kunye nephupha leeprojekthi ezizayo abafuna ukuzifezekisa. Kuko konke oku, umboniso wonyamezelo uyimfuneko, kodwa ngaphezu kwako konke, ukusebenzisana okuza kusebenza njengendlela ... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Iqonga likaYouTube alidinwa kukwenza izinto ezintsha kunye nokubonelela ngezinto ezintsha kubalandeli balo. Ngeli xesha lifake inketho yokukhangela ngelizwi ngendlela elula kakhulu kwaye ekhawulezayo. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngalo mbandela ungasuki kwinqaku elilandelayo. Ukukhangela... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Uninzi lwabantu lunokuhamba ngenkqubo yokufuna ukucima iakhawunti yePinterest okanye bayivale ukuze ifumane iziphumo ezingcono xa kufikwa ekufumaneni iziphumo ezingcono. Mhlawumbi abantu abaninzi bayazibuza ukuba kutheni inokuba licebo elilungileyo ukukhuthaza ukucinywa kweakhawunti. Ukwazi ukucima okanye ukuvala i... ufunde kabanzi
Uyifumana njani inketho "yeVidiyo endizithandayo" kwiYouTube?
Thenga Abalandeli! Iqonga likaYouTube libandakanya ukhetho olusivumela ukuba sijonge uluhlu olupheleleyo lwazo zonke iividiyo "esizithandileyo". Ukufikelela kolu luhlu, kufuneka sicofe iqhosha elithi "Iividiyo endizithandayo" kwimenyu ephambili. Kodwa ukuba awuyazi indlela yokufikelela kolu khetho... ufunde kabanzi
Ungayitshintsha njani iakhawunti yeshishini iyeyakho kwiPinterest?
Thenga Abalandeli! Abantu abaninzi bathatha isigqibo sokutshintsha iakhawunti yabo yePinterest ngezizathu ezahlukeneyo ezenza ukuba ilunge kakhulu namhlanje. Nangona kunjalo, ngenxa yolu hlobo lwemeko, kunokwenzeka ukuba banike ikhefu okanye isikhokelo esitsha kwiingcamango zabo ezinokwenzeka malunga neeprojekthi abanazo namhlanje. Nangona kubonakala ngathi… ufunde kabanzi
Ndingayivula njani iakhawunti yeshishini lePinterest?
Thenga Abalandeli! Kuyinto eqhelekileyo ukuba abantu bafune ukuba ne-akhawunti ye-Pinterest yobuqu ukwenza ingqiqo engcono kuyo yonke into abayenzayo ngaphakathi kweqonga. Ngamanye amazwi, ukukhetha izimvo zokuhombisa okanye ukwenza iiprojekthi zabo zaziwa ngabanye njengendlela yokunxibelelana. Nangona kunjalo, iinkampani ezinkulu ... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Iiplatifti ezahlukeneyo zonxibelelwano ziye zaphucula ujongano lwazo ukuze zinikeze okona kulungileyo kubasebenzisi yonke imihla. Nangona kunjalo, i-Pinterest ibe yenye yamaphepha aguquke ukuze abonelele ngamava ahlala ehlala kwaye anyanisekileyo kubo bonke abantu abanqume ukungena kuyo. Nangona abaninzi bengazazi zonke izinto ezilungileyo ... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Abantu abaninzi bakholelwa ukuba iPinterest liqonga elinzima lokulisebenzisa apho kungekho thuba lokuba ngomnye wabantu abajongwe kakhulu eqongeni. Nangona kunjalo, kudidi lwabasebenzisi be-Intanethi, iindlela ezahlukeneyo zinokwenziwa ngaphandle kokubeka esichengeni ukugcinwa kwezixhobo. Nangona kunjalo,… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Abantu abaninzi ngakumbi bafunda ukuba nokwenzeka kokwenza ijelo labo likaYouTube kwaye baqale ukufumana imali ngeli qonga. Ukuba kunjalo, masixelele ukuba uya kufuna uncedo lwababhalisi. Yiyo loo nto namhlanje sikubonisa ezinye iindlela zokufumana… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Ubusazi ukuba iYouTube idibanisa imowudi ye-incognito phakathi kwemisebenzi yayo? Ukuba awuyazi ukuba esi sixhobo sithetha ukuthini kwaye sesantoni, siyakumema ukuba ufunde eli nqaku lilandelayo apho siza kuchaza ukuba yintoni imowudi ye-incognito yeYouTube malunga nokuba sinokuyivula njani kwimizuzu embalwa. Yi le … ufunde kabanzi
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha303 Elandelayo →
© 2022 Abalandeli ▷➡️ • Yenziwe nge GeneratePress